IPUMP YESIFUNDO ESIDALA ENTABENI - I-Airbnb
IPUMP YESIFUNDO ESIDALA ENTABENI
Ngenxa yemeko ye-para-emergency, xa usenza ugcino, nceda uqinisekise ukuba uneemvume ezisuka kwi-Border Guard zokungena kwindawo.
Uxolo ngokwenzela ingxaki!
Kungakhathaliseki ukuba uze nabantwana bakho kwiholide ezolileyo; nabahlobo kukhenketho lwebhayisekile kwi-Podlasie backwoods okanye ukusebenza iintsuku ezimbalwa kunye neofisi ekude, sinempendulo kwiimfuno zakho.
I-Stara Pompka sisakhiwo sezitena ezibomvu esineminyaka elikhulu ubudala esalungiswa ngoJuni ka-2019, esikwibala elingaphezu kwesiqingatha sehektare. Enye yeentsalela ezimbalwa zikaloliwe tsarist kule ndawo. Idama elibonakalayo kwiifoto lalingumthombo wamanzi kwiinjini zomphunga ezimisa kwisikhululo esimalunga neemitha ezingama-500 kude - sikhoyo ngoku.
Sinikezela ngeendwendwe zethu enye yamagumbi amabini abekwe kwi-cottage - studio ebekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo. Igumbi elisezantsi linokuqeshwa ngokwahlukileyo okanye njenge-cottage yonke (intlawulo eyongezelelweyo). Omabini amagumbi adityaniswe ngezinyuko eziqhelekileyo. I-studio ephezulu iquka igumbi elikhulu elinebhedi enkulu ephindwe kabini kunye nebhedi ye-sofa; itshiswe ngeziko, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye neshawari. Indawo yokuhlala imalunga ne-40 m2.
Iilwimi: Čeština, English, Deutsch, Polski, Русский